အတွေ့အကြုံ - Cross-Channel Marketing ပလက်ဖောင်း Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 20, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Experian စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်း ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများနှင့်တစ် ဦး ချင်းရုပ်သံလိုင်းရောင်းချသူများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ရှားခြင်း - တစ်ခုတည်းသောစနစ်တစ်ခုအတွင်းရှိဖောက်သည်များ၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစီမံရန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုစွမ်းအားရှိသည်။ platform သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအားမည်သည့်အချက်အလက်အရင်းအမြစ်မှမဆိုဖောက်သည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအလွယ်တကူပေါင်းစပ်နိုင်စေရန်၊ အီးမေးလ်၊ မိုဘိုင်း၊ လူမှုရေး၊ ဝဘ်၊
Experian Cross-Channel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်း:
ဒေတာပေါင်းစည်းမှု - မည်သည့်အရင်းအမြစ်မှမဆိုဖောက်သည်အချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် Experian Marketing Services ၏ကြွယ်ဝသောစားသုံးသူထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအလွှာများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်များ၏မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်ကိုရယူပါ။
Cross- ရုပ်သံလိုင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစီမံခန့်ခွဲမှု - Cross-channel စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများအားလုံးကိုဗဟိုမှစီမံပြီးသင့်ဖောက်သည်များအားအစဉ်အမြဲလိုက်နာရန်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အတွေ့အကြုံများကိုချောမွေ့စွာပို့ဆောင်ပေးသည်
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု - သင့်ဖောက်သည်များ၏တုန့်ပြန်မှုနှင့်စိတ်ဓါတ်များကိုဖမ်းယူပါ၊ ထို့နောက်ထိုအချက်အလက်များကိုပိုမိုသက်ဆိုင်ရာနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီကူးလူးဆက်သွယ်မှုများအတွက်ချက်ချင်းအသုံးချပါ
Experian လုပ်သောအချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလက်ကမ်းစာစောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များမမြင်ရ လိုင်းများသူတို့ကအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပဲတွေ့တယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ မလိုအပ်သောအရာများကိုလျှော့ချရန်၊ ဖောက်သည်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်၊ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သူတို့၏ဆက်နွယ်မှုကိုအပြည့်အ ၀ ပြောဆိုရန်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်စနစ်တကျပြောဆိုရန်လမ်းကြောင်းများတစ်လျှောက်ကြိုးပမ်းမှုများကိုညှိနှိုင်းရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်။
Tags: Cross-channelCross-channel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးCross-channel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းအတွေ့အကြုံ
သိရန် 10 အရောင်းစွမ်းဆောင်ရည်အချက်အလက်များ
22:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 55
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ငွေကြေးအလွန်အမင်းနည်းနေပြီးအကြွေးများကကျွန်မကိုနှစ်ဖက်စလုံးကစားနေခဲ့သည်။ ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာငွေရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အထိပါပဲ။ ငါ surveymoneymaker dot net ကိုသွားပြီး၊ ငွေသားအတွက်စစ်တမ်းတွေစတယ်။ ငါငွေကုန်ကြေးကျများတယ်။ ငါအရမ်းပျော်မိတယ်၊ ငါဒါလုပ်ခဲ့တယ် !! ဒီနှစ်တွေအတွင်းဘဏ္stressာရေးအရဖိစီးမှုတွေနဲ့အတူသင်တို့အားလုံးကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်လို့ငါတကယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ - vttm
ဇန်နဝါရီ 4, 2014 မှာ 5: 15 AM
aJ5u - လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ငွေကြေးအလွန်အမင်းနိမ့်ကျခဲ့ပြီး၊ ချေးငွေများကြောင့်ကျွန်တော့်ကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါပိုက်ဆံရှာဖို့လေ့လာသင်ယူမှီတိုင်အောင် .. ဒါဟာမှန်ကန်သောဖြစ်ခဲ့သည်! ငါ surveymoneymaker point net ကိုဆင်းသွားပြီးပိုက်ဆံအတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ် !! ငါလုပ်ခဲ့သောကြောင့်ငါဝမ်းသာတယ် !!! ဒီနှစ်တွေအတွင်းဘဏ္stressာရေးအရဖိစီးမှုတွေနဲ့အတူသင်တို့အားလုံးကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်လို့ငါတကယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ r04O